I-Element Society - Insizakalo Yentsha Yasebasha Yokukhula KaSheffield
ukholelwa kubantu abasha ekufinyeleleni okungenakwenzeka
Joyina ithimba le-Element
Ukuzibophezela kwethu ku-NCS
Usuvele ungene ngemvume?
Sekela Umsebenzi Wethu
Siyizinsizakalo zentsha engenzi-nzuzo esekelwe eSheffield, ukuletha intuthuko, izinhlelo zenhlalo nezentengiselwano kubantu abasha kanye nabantu abadala abasengozini. Sihlose ukunika amandla abantu abasha ukwenza ushintsho oluhle emiphakathini yabo, bakhulise izifiso zabo futhi babe yizibonelo zabangane babo.
Ingabe uneminyaka engu-15 - 17 osemdala futhi ufuna ukuzuza kakhulu ehlobo lakho?
Joyina i-NCS ukuthola isipiliyoni esihle! Hlangana nabantu abasha, wenze abangane abaphila isikhathi eside futhi uthole amakhono amasha ku-CV yakho.
Thola okuningi mayelana ne-NCS
Funda mayelana nokunye okuhlangenwe nakho kwabantu
Unayo indodana noma indodakazi, noma unakekela umuntu omusha?
Thola ukuthi uhlelo lwe-2019 NCS lungabanika kanjani ihlobo kanye nekhono lobuchwepheshe abazolikhohlwa.
I-FAQ mayelana nesipiliyoni
Ibiza kancane kunalokho ongase ucabange
Ungumuntu osebenza nabantu abasha?
Thola ukuthi uhlelo lwe-NCS lungabanikeza ulwazi olusha, ukuthuthukisa amakhono amasha nokwenza abangane abasha, abaphila isikhathi eside.
Ulwazi olubanzi ngathi
Izithuba ezihlala njalo nezonyaka
Sinezinkolelo eziyisisekelo ze-3
Ngenkxaso nokuzikholelwa, abantu abasha bangakwazi ukufeza lokho okungakholeki
Njengomusa wobusha esiyazi ukuthi wanikezwa amathuluzi alungile, isikhala nokusekelwa, okungakholeki kuyaphumelela.
Ezinye izibonelo zabantu abasha abafinyeleleka ku-Element Society ezingabonakali zihlanganisa: izikhwama zokuzivocavoca, ukuhweba ezimakethe ezimakethe, ukuklama nokuqhuba amashabhu, ukuhlukunyezwa nokucwasana, ukubhekana nokufinyelela okukhubazekile nokunye okuningi. Yini ezokushaya ukuthi lezi zinkokhelo azigcini nje ngokuthi zenzelwe ukuthi zithandwa kakhulu kodwa zenziwa yiwo wonke umuntu.
Ukuhlinzeka abantu abasha abanegunya langempela ukuthatha isinyathelo esihle emphakathini wabo
Sisaqala njalo amaphrojekthi amasha ukuthuthukisa zonke izici zomphakathi. Abantu abasha basenhliziyweni yazo zonke izentuthuko zethu ezintsha njengezinsizakalo zentsha.
Ezinye zezinhlelo zethu zenzelwe abantu abasha baseSheffield naseSouth Yorkshire. Eminye imiklamo yethu inabantu abasha abaqhubekela phambili kusuka kubahlanganyeli ukuya ezikhundleni ezikhokhwayo. Yonke imiklamo yethu inabantu abasha ababandakanyekayo kuzo zonke izigaba - kusukela emqondweni nasekwakhiweni, ekufundiseni nasekuhloleni.
Ukukhuthaza abantu abasha ukuba babe yizibonelo ezinhle kulabo abazungezile
Ukuqaphela ukuthi izinhlobo zontanga ziyizinto ezinamandla ekuthuthukiseni abanye abantu abasha kubalulekile ezindleleni zethu eziningi.
Ngalokhu sihlinzeka ngesikhala nethuba lokubamba iqhaza ekwenzeni izinsizakalo lapho kungaba khona izibonelo ezinhle. Lokhu kuhlanganisa nokuba yilungu leBhodi yethu Yentsha edala ukuthi isakhiwo senhlangano kanye nesiqondiso samaphrojekthi ethu. Lena enye yezindlela eziningi esibeka ngayo izindinganiso zokuzikhandla kangcono njengosizo lomusha.
Uma wabelana ngombono wethu nesifiso esingenasiphelo sokwenza umthelela omuhle emhlabeni, sicela ungene ekuthinteni. Sitshele ngemibono yakho kanye nesipiliyoni sakho, kungakhathaliseki ukuthi ufuna ukusebenzisana nathi kulokho okwenzayo, noma kithi okuthile esikwenzayo.
Sitshele - 0114 2999 210
I-imeyili yethu - hello@elementsociety.co.uk
Abalingani nabasekeli bahlanganisa:
I-EFL TRUST // I-NCS TRUST // I-CABINET OFFICE // SHEFFIELD AMAKHAYA // I-BOT LOTTERY // KUKHULULEKILE // SHEFFIELD HALLAM // UNIVERSITY OF SHEFFIELD
Isenzo sokubambisana ngokumelene ne-Knife Crime U-OPEN INVITE
I-NCS Amathuba Okuqeqesha - Funda lokhu ukuze uhileleke!
SUMMER 2018 LINDA i-3
SUMMER 2018 LINDA i-2
I-NCS Sheffield 2018 Graduation Party